Any amin’ny CAPSAT, hono, no misy vola? – Malag@sy Miray
Any amin’ny CAPSAT, hono, no misy vola?
Misandratr’andron’ny Alatsinainy, amin’iny tohotohobaton’Antaninarenina iny. Miresaka ireto roalahy (avy any amin’ny banky angamba) ary mitaraina ny iray fa toa tsy nisy vola ‘positionné’ tany amin’izay nalehany tany. Tsy hariny ny tsy hanontany ilay namany ny amin’izay tokony hataony. Teo no nahalalako fa hay miaramila ireto roalahy ireto, satria hoy indrindra ilay mpanontany:
Fa ahoana ihany ary letsy no tsy mbola tonga ny vola a?. Tena hangataka hiala ao amin’ny R.T.S lesy aho dia hifindra any amin’ny CAPSAT
Namaly azy ilay namany, toa tsy nanampo akory ilay resak »itsy voalohany
Fa ahoana leity?
Tsotra no navalin’ilay iray azy
Ka any anie hono no be vola izao e
Dia lasa ny saiko, indrindra fa nampian’ilay vaovao farany momba ireo miaramila iraky ny Task Force hanara-maso ny resaka Bois de Rose tany amin’iny faritry Sambava sy ny manodidina iny. Niharan-doza teny an-dàlana niverina mantsy ity fiara 4×4 nisy miaramila 3 lahy. Nivadika ambony ambany, ary dia ny fokonolona no namonjy sy nandefa azy ireo hotsaboina (tatitra an-gazety -MIDI- ny Alatsinainy no nahitako an’io). Nandritra izany rehetra izany no nahitàna vola 125.000.000 Fmg teo ho eo tany amin’ireto miaramila ireto. Vola avy aiza? Tsy fantatro.
Marihako fa nisy fotoana nivahinianako tany amin’ny Toerana fanofànana Zandary tao Moramanga. Herinandro aho no nonina sy nipetraka tao amina tokantrano-na zandary iray tao amin’ity toeram-panofanana ao Moramanga ity. Nimenomenona ireo Zandary ireo fa ny tambin-karama ‘indemnités’ isankarazany tokony horaisin’izy ireo rehefa avy mamita iraka (tamin’izany fotoana nandalovako izany) dia na an-taonany no ifandroritana amin’ny tomponandraikitra, na dia any dia tsy hita (taona 2006 tany ho any).
Koa raha izany no zavatra nisy sy reko tany Moramanga, dia vola avy amin’ny inona, na vola avy taiza ary ireto hita tamin’izy telolahy niharan-doza ireto? Raha raisintsika ho tambin-karama: dia efa tena nihatsara tokoa izany ny tontolon’ny asan’ny mpitandro filaminana an! Ary efa nihahaingana ny fikarakarana ny antontan-taratasin’izy ireo. Nefa, izy rehetra ve? Raha tsy izany kosa no zava-misy, dia mampieritreritra ihany, ho anay sarambabem-bahoaka, sy ho anareo ao ambonimbony ao. Resa-be eny anivon’ny fiaraha-monina mantsy amin’izao fotoana izao ny fireharehan’ireny miaramila ireny amin’ny fanànana vola sy ny fomba fandaniany azy.
Fa hiverina kely amin’ilay resaka ‘bois de rose’ aho: firifiry izay efa tratra izay, voalaza fa misy olona ambony ao ambadika ao, nefa toa tsy misy mihitsy anarana sahy tononina hatramin’izao. Lazaina fa tratra tatsy ny asmbo izatsy sy zaroa, nisy làkana tratra tatsy, nisy toerna nandevenana azy ireny tany ananona, fiara vaventy toy itsy no voasakana teny ananona, sns…
Ho tonga anie ny mangarahara!
29 octobre 2009 à 8:51
Somary malahelo ihany ny tena mahtsikaritra ny zava-misy eto amin’ny firenena.
Ny vola marina moa izany no hozatry ny fiainana ary ny vola no herin’ny ady…
Raha tsiahivina ny soratr’i Ed Andriamalala tao amin’ny Fanagasiana dia toy ny ranon-tsira ny vola ka mampangetaheta. Mino ve izy roalahy ireto fa raha ampiakarina ny tambin-karama omena azy dia tena ho ampy azy ka tsy himenomenona intsony izy ireo?
Marina fa mafy ny fiainana saingy mila mahay mitantana ny kely ananana ihany koa ny tsirairay ahafahana mihary sy mampitombo ny eo am-pelatanana.